Cool Jewels is a online slot game from WMS and is the first game from their roster to use the exploding pays engine. The slot basically has 6 reels and pays all ways. You can play this game from as low as 50p per spin to as much as £200 a spin. Manasongadina ny lalao ihany koa ny fihodinana tombony maimaim-poana toy ny spins, ravahan'ny reels sy ny tampon-tanety.
Cool Firavaka manana foto-kevitra kinda mamirifiry amin'ny miloko samy hafa firavaka firavahanareo ny reels. Ny sary dia tsy tena ny tsara mba hanoratra betsaka momba nefa fotsiny momba ny asa ampy mba hahatonga ny lalao kilalao zavatra tsy mankaleo. Koa ny hira eo amin'ny tsipika sy marina ihany no ampy. Na dia tsy tena ny fahadisoam-panantenana ianao kinda sisa te bebe kokoa.
Fa ny lalao izay tsy ampy manerana sehatra rehetra hihamangatsiaka Firavaka no tena tsara ho an'ny tsirairay optimisé ny sehatra. Ny mikasika lamba valiny amin'ny finday lehibe ary koa ny lalao milalao, nefa tsy nendahan be lags na fahatarana. Tena asa mahafinaritra avy WMS amin'ny lafiny ity.
Ny mipoaka Pays maotera ankapobeny dia manome anao ny fomba maro mba handresy toy ny fivoaky ny marika hitondra faharavàna ao amin'ny reels tamin'ny vary main'ny rivotra sy mipoaka eny rehetra eny. Ny lalao milalao tsy mba dia tahaka ny an'ny mahazatra slot lalao mba hahazo tsy maintsy mahazo 4 na mihoatra ny mitovy marika mifanaraka mitsangana na horizontally. Ary ireo marika ireo herin'ny maizina rava mba hanome anareo marika vaovao sy ny fahafahana handresy indray.
Cool Firavaka no ankapobeny ny 5 Reel slot lalao amin'ny fomba maro mba handresy. Afaka milalao ity lalao ity avy 50p isaky ny namoly ho toy ny kofehy ireny £ 200. Ny slot manana ambany ny mpanelanelana amin'ny tontolo hampifandrafy amin'ny maro matetika mitranga kely Fandresena. Hianao koa no mahazo ny lehibe gotta Fandresena fa manana faharetana kely fa.
Ny mahafinaritra sy ny fifadian-kanina dava toetran'ny ity lalao ity mba hampahatsiaro anareo ny NetEnt ny Starburst. Raha ny marina lalao roa ireo dia manome toy izany koa ny lalao milalao karazana traikefa indrindra satria na ny mitovy karazana lalao fitaovana.
Koa ity lalao ity dia manana tombony spins maimaim-poana, izay, raha niteraka no homenao anareo ho amin'ny 8 maimaim-poana spins. Izany no niteraka ny marina, rehefa 4 na mihoatra ny tombony marika ringana.